अष्ट्रेलियावाट अवैधानिक पैसा पठाउने कम्पनि (हुण्डी) कसरी पहिचान गर्ने ? - PayRu Remit
यदी तपाई अष्ट्रेलिया बस्ने नेपाली हुनुहुन्छ र नेपाल पैसा पठाउने Money Transfer Company वैध वा अवैध हो भनी पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई हुण्डी पत्ता लगाउन सामान्य उपाय बताउने छौ ।
अहिलेसम्म धेरैजसो नेपाली पैसा पठाउन Money Transfer Service छनौट गर्दा अनौपचारिक पैसा पठाउने माध्यम हुण्डीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।
तर सायद तपाईहरु लाई थाहा नहुन सक्छ, वास्तवमा हुण्डी भनेको के हो ? त्यसैले सर्वप्रथम हामी हुण्डी भनेको के हो भनेर बुझौं।
हुण्डी रेमिट्यान्सको लागि प्रयोग हुंदै आएको गैरकानुनी माध्यम हो, जसमा पैसाको कारोवार वैंकिङ्ग माध्यम भन्दा बाहिरबाट हुन्छ । हुण्डी कारोवार नेपालमा गैरकानुनी हो । विदेशवाट पैसा पठाउने माध्यमको रुपमा नेपाल राष्ट्र वैंकले हुण्डीलाई स्वीकार्दैन । हुण्डी कारोवारलाई नेपालको कानुन अनुसार दण्डनिय अपराध मानिन्छ । कोही यो कारोवारमा संलग्न रहेको पाईएमा कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ ।
तर, अष्ट्रेलियामा हुण्डी कम्पनि कानुन बमोजिम नै दर्ता हुन्छ । नेपालमा गैर कानुनी भएकोले अष्ट्रेलियामा रहेका हुण्डी कम्पनिहरुले नेपाल पैसा पठाउन कानुनी तरिका अपनाउदैनन् । उनिहरुले वैंकिङ्ग प्रकृयाको स्थानमा तेश्रो देशको व्यक्तीको सन्जाल हुंदै नेपालमा रहेको आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउछ्न् र नेपाल स्थित एजेन्टले बिभिन्न ब्यक्तीको नामबाट तपाईंको आफन्तको बैंक एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्दिन्छन ​। त्यस्तै यसरी गएको पैसालाई नेपालका कतीपय बैंकहरुले गैर-कानुनी भनि कारोबार गर्दैनन् । तपाईले यहां राज्यलाई कर तिरेर कमाएर पठाएको पैसा नेपालमा आफन्तले प्राप्त गर्दा आम्दानीको आधिकारिक श्रोत बन्न नसकि कतिपय अवस्थामा कालोधन हुन जान्छ ।
नेपालमा हुण्डी कारोवार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि एक गम्भिर चुनौती बनेको छ । यसरी गैरकानुनी ढंगवाट कारोवार भईरहेकोले राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने अरबौको कर तथा वैदेशिक मुद्राको संचितीमा हुण्डीले नकारात्मक असर गरिरहेको छ । तथापी अष्ट्रेलियामा हुण्डी कारोवार नेपाली समाजमा व्याप्त छ । नेपाल राष्ट्र वैंकको अनुसार फेब्रुअरी २०२० देखि अक्टोबर २०२० सम्म अष्ट्रेलियाबाट कानूनीरुपमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स २५ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन विदेशबाट नेपालले प्राप्त गर्ने कुल रेमिट्यान्सको ३.५८% मात्र हो।
२०२० को फेब्रुअरी देखि अक्टोवर २०२० सम्म नेपाल भित्रिएको रिमिटेन्स
देश कूल रु (मिलियन) हिस्सा (%)
अमेरिका १४६,०२०.५० २०.८४
भारत ७८,२०७.०० ११.१६
कतार ७५,६३१.७० १०.७९
साउदी अरेबिया ७३,३२८.७० १०.४६
संयुक्त अरब ईमिरेट्स ७३,१३७.६० १०.४४
मलेसिया ६६,७३२.८० ९.५२
जापान ५५,०६९.२० ७.८६
अन्य ३३,५९५.१० ४.७९
कोरिया ३३,४१३.४० ४.७७
अष्ट्रेलिया २५,०६४.८० ३.५८
कुवेत १५,७९५.१० २.२५
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) १४,३८५.७० २.०५
बहराईन १०,४२६.३० १.४९
जम्मा ७००,८०७.८० १००
माथीको तथ्यांकलाई हेर्दा, एक लाख भन्दा धेरै नेपाली बसोबास गरिरहेको अष्ट्रेलियाबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिट्यान्सको हिस्सा यो भन्दा धेरै गुणा बढी हुनु पर्ने हो । यसले यो प्रमाणित गर्दछ कि अझै पनि रेमिट्यान्सको एक ठूलो हिस्सा नेपालमा अष्ट्रेलियाबाट अवैध च्यानल (हुण्डी) को माध्यम बाट जाने गर्दछ ।
बिगतका बर्षहरुमा अष्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा हुण्डीवाट ठगीएका धेरै घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । पिडितहरु धेरै जसो युवा र अध्ययनको लागि यहां आएका नेपाली विद्यार्थी छन, जसलाई उच्च विनिमयदर र तुरुन्त पैसा पुग्ने बहानामा हुण्डी कारोवारीले ठगिरहेका छन् । यस्ता बिभिन्न घटनाहरुमा हुन्डी कम्पनीले अष्ट्रेलियामा रकम संकलन गरी नेपालमा पठाउनेका आफन्तलाई रकम भुक्तानी गरेका थिएनन् ।
हुण्डी कसरी पहिचान गर्ने ?
पेरु रिमिटले तपाईंहरुलाई हुण्डी पहिचान गर्न केहि आधारभूत तथ्य र उपायहरु बुदागत रुपमा तल प्रस्तुत गरेको छ ।
हुण्डी अष्ट्रेलियामा Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) मा दर्ता गरी तर नेपालमा नेपाल राष्ट्र वैंकमा दर्ता नगरी कारोवार गर्दछ । जुन नेपालको कानून अनुसार गैरकानूनी हो र प्राप्त हुने रकम कालोधन हो ।
हुण्डी कम्पनीको नेपालमा कुनै पनि बैंक, बित्तिय संस्था वा मनी ट्रान्सफर कम्पनी (रेमिट) आधिकारीक पार्टनर हुँदैन।
नेपालमा हुण्डी कारोबर गैरकानुनी भएकोले प्रहरीले वारम्वार छापा मार्ने हुँदा, उनिहरुको आफ्नो कुनै स्थायी भुक्तानी केन्द्र हुंदैन ।
हुण्डीको एक्स्चेन्ज रेट कुनै पनि कानुनी रिमिट भन्दा बढी हुने गर्दछ ।
धेरैजसो हुण्डीहरुले सामाजिक सन्जाल फेसवुक, ह्वाटस्एप, भाईबर आदि माध्यम प्रयोग गर्दछन् तर आजभोली केही हुण्डीले Website र App पनि प्रयोग गरिरहेका छन् जसमा तपाईहरु धेरै चनाखो हुन जरुरी छ, नत्र ठगिने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ ।
हुण्डी कम्पनीले दैनिकजसो तपाईंहरुलाई आकर्षण गर्न सामाजिक सन्जाल वा ग्रुप च्याट मार्फत आफ्नो उच्च एक्स्चेन्ज रेट बताइ रहेका हुन्छन ।
हुण्डीहरुले तपाईले ठूलो रकम पठाउदा विशेष एक्स्चेन्ज रेट पनि दिन्छ्न् ।
AUSTRAC बाट आफ्नो वास्तबिक कारोबार लुकाउनका लागि हुण्डी कम्पनीहरुले बारम्बार आफ्नो बैंक खाता परिवर्तन गरी रहेका हुन्छन् ।
त्यसैले तपाईको हातले विदेशमा दु:ख गरेर कमाएको पैसा उच्च एक्स्चेन्ज रेटको लोभमा जोखिममा नपार्नुहोस् ।
अष्ट्रेलियाको सबै भन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो नेपाल पैसा पठाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत कानुनी मान्यता प्राप्त माध्यम, Payरु Remit लाई एकपटक विश्वास गरेर हेर्नुहोस ।
आजै पेरुमा Sign up गर्नुहोस र नि:शुल्क ट्रान्सफर गर्ने मौकाको फाइदा उठाउनुहोस ।
iOS तथा Android Appstore बाट PayRu Remit App डाउनलोड गरी 24/7, मिनेटमा नै हाल बजारमा उपलव्ध भए मध्येको उत्कृष्ट बिनिमय दरमा नेपालमा
आफ्ना प्रियजनहरुलाई ढुक्क सँग पैसा पठाउनुहोस ।
हाम्रा सबै अफर र योजनाका बारेमा हामी सामाजिक संजालहरूमा नियमित Post गर्दछौँ ।
हाम्रा अपडेटहरु नछुटाउन हामीलाई Facebook, Instagram, Tiktok र Twitter मा like र follow गर्नुहोस् ।